Siri uye beta yeIOS 14.5 inobvumidza kugadzirisa sevhisi yekushambadzira mimhanzi nekukasira | IPhone nhau
Siri uye beta yeIOS 14.5 inobvumidza kugadzirisa sevhisi yekushambadzira sevhisi nekutadza
iOS uye iPadOS 14 yakaunza zvakawanda zvitsva zvinhu zvataisatarisira. Imwe yadzo yaive mukana wekusarudza iyo web browser nekusarudzika kweIOS uye iPadOS pakati pese maapplication anoenderana neiyi system. Kuti uite izvi, vagadziri vaizofanirwa kutanga vagonesa basa iri kuti gare gare, mushandisi agone kushandura Safari seye default browser uye kuunza vamwe vakaita seGoogle Chrome kana Firefox. Mu iOS 14.5 beta yakaburitswa vhiki rapfuura zvakaonekwa kuti Siri inogona kugadzirisa iyo yekusarudzika mimhanzi yekushambadzira sevhisi kuridza mimhanzi patinokumbira. Asi imwezve nguva iyo kusanduka kweApple kunotanga kuonekera.
iOS 14.5 inobvumidza iwe kuti uchinje iyo yekushambadzira mimhanzi sevhisi
Beta yekutanga yeIOS 14.5 inoratidza iyo huru yekuvandudza yeIOS 14 izvo zvatakaona kusvika nhasi. Sezvo zvinhu zvitsva kuratidza, kusvika kweiyo iPhone kuvhura kuburikidza neApple Watch patinopfeka mask kana kuenderana kwemaSIM maviri ne5G panguva imwe chete kwakakosha.
IOS 14.5 uye watchOS 7.4 Veruzhinji Betas ikozvino yavapo
Rutsva rwakawanikwa mukati meyekutanga beta yeIOS 14.5 ndiyo mukana wekugadzirisa iyo yekushambadzira mimhanzi sevhisi pakukumbira Siri kuti atiridze nziyo. Iri basa rinogona kugadziridzwa kekutanga isu patinokumbira Siri kuridza mimhanzi. Menyu inozoratidzwa neese maapplication atinogona kubereka chikumbiro chedu uye sarudzo inomira kusvikira tasarudza kuichinja.
Vashandisi vanovimbisa kuti kune akawanda maapplication anoenderana: Youtube Music, Apple Music, Spotify, Castro, Deezer, Apple Mabhuku, Apple Podcasts, nezvimwe. Zvisinei, zviri kuonekwawo izvozvo ficha iyi ichiri mukuyedza sezvo dzimwe nguva iyo Siri menyu inoratidzwa zvakare kusarudza sevhisi kana mushure mekuita chikumbiro chitsva inoridzwa zvakare nekutadza muApple Music. Asi zviri pachena ndizvozvo iOS 14.5 inogona kunge iri kutanga kwekuwedzera kugadzirisa nzira iyo Siri inopindirana neyedu yekushambadzira mimhanzi maapp.
Mufananidzo - Reddit
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Siri uye beta yeIOS 14.5 inobvumidza kugadzirisa sevhisi yekushambadzira sevhisi nekutadza
Maitiro ekuongorora mhando yeinternet yako kuti uone Netflix
Apple inosarudza pane inopetwa "goko" iPhone